Ebumnuche maka ịtụgharị ọdịnaya ka ọ bụrụ ntụgharị | Martech Zone
Monday, October 14, 2013 Sunday, October 13, 2013 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị nụbeghị mmekọrịta ion, ị ga-enyocharịrị ha. Ọ bụghị naanị na ha nwere ụfọdụ sọftụwia websaịtị dị egwu maka okike na ịnwale ahụmịhe ọdịda dị irè, ha na-enyekwa ọtụtụ nkwado data na omume kacha mma maka azụmaahịa. Ha na-ekwu okwu n'ọtụtụ ihe na mba niile ma na-enye afọ ojuju oge niile. Ihe omuma ihe a adighi iche:
Ntughari ngwa ngwa iji mee ka otutu ihe di n'ime gi na nbudata peeji. Ihe omuma ihe omuma a na-egosiputa usoro itolu di iche iche maka itinye aka na blọọgụ, akwụkwọ ọcha, infographics na slide decks maka ọgbọ ndu.
Nwere mmasị ịgụ ihe ọzọ? Debanye aha iji nweta Peeji nke 15 peeji nke ọdịda maka Akwụkwọ Echiche Mgbasa Ọdịnaya. Mee omimi miri emi n'ime usoro 9 kpuchitere na infographic na aka, budata .pdf.
Tags: echiche ịre ahịa ọdịnayamgbanweionmmekọrịta ionọdịda peeji echicheọdịda peeji nke echichembido peeji nkeụdị ọdịda peeji
Mgbasa Ahịa Na-achọ Iche Echiche Mobile